दुई वैज्ञानिकलाई चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार, के हो उनीहरुले गरेको अध्ययन? – Yug Aahwan Daily
दुई वैज्ञानिकलाई चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार, के हो उनीहरुले गरेको अध्ययन?
युग संवाददाता । १९ आश्विन २०७८, मंगलवार १६:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं– शरीरले मानव स्पर्श र तापक्रम महसुस गर्ने प्रक्रियामा गरेको अध्ययनका लागि अमेरिका दुई वैज्ञानिकलाई २०२१ को नोबेल पुरस्कार दिइने भएको छ। अमेरिकका वैज्ञानिक डेभिड जुलियस र आर्डेम पाटापौटियनलाई चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार दिने निर्णय भएको नोबेल पुरस्कार छनोट समितिले जनाएको छ।
उनिहरूले हाम्रो शरीरले कसरी घामको न्यानो वा माया गर्ने मानिसको अङ्गालोको न्यानोपना महसुस गर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरेका थिए। शरीरले कसरी शारीरिक स्पर्शलाई स्नायु प्रणालीमा विद्युतीय सन्देशका रूपमा परिवर्तन गर्छ भन्ने बारेमा उनीहरूले गरेको अध्ययन दुखाइसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उपचारका लागि उपयोगी हुने बताइएको छ।
त्यस्तै, पाटापौटियनले गरेको अध्ययनबाट फरक खालका तर कुनै भौतिक दबाव वा स्पर्शले सक्रिय हुने कोषको अंश पत्ता लागेको थियो। दुवै जनालाई पुरस्कारस्वरूप आठ लाख ४५ हजार पाउन्ड रकम प्रदान गरिने नोबेल कमिटीले जनाएको छ।
कमिटीले कोरोनाभाइरुसको महामारीका कारण यसवर्षको नोबेल पुरस्कार विजेताहरूलाई सम्बन्धित देशहरूबाटै प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ।